Thwebula BitLord 2.4.6 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: BitLord
Amazwana ku BitLord
BitLord software ehlobene
Isofthiwe for the ukubukela inthanethi amabhayisikobho nezinhlelo ze-TV kuleli inqubo thwebula. Isofthiwe isethi elikhulu video of izinhlobo ezahlukene kanye iqinisekisa a high quality ukudlala.
Ama-Ares – ithuluzi lokulanda nokwabelana ngamafayela ku-inthanethi. Isoftware ikuvumela ukuba ulande amafayela ngokushesha futhi ifaka isidlali esishumekiwe sokudlala amafayela wemidiya.
Isikhukhula – kulula ukuyisebenzisa iklayenti lesifufula ngokwabelana ngefayela nge-Intanethi. Isoftware ikuvumela ukulanda noma ukwethe okuqukethwe okuqukethwe kumanethiwekhi ahlukahlukene wesifufula.